Calligra, oo ah tartan weyn oo ka socda Libreoffice | Laga soo bilaabo Linux
dabogal 92 | | Aplicaciones, Naqshad, GNU / Linux
Weli waan xasuusan karaa wixii lagu soo daray xafiis furan iyo nacaybkii weynaa ee loo abuuray xagga hadalka, kaas oo dhiirrigeliyay dhalashada libreoffice oo ah fargeeto ay qaateen inta badan (haddaanay wada ahayn) distros.
Laakiin nasiib daro maadaama noocyada xafiiskani ay horay usii socdaan, wali waxaa jira dhibaatooyin isku mid ah oo walwal leh sida had iyo jeer ah, oo aan lagu xusin isdhexgalkeeda oo la mid ah xafiiska Ms 2003.
Adduunyada ay wali Windows ka taliso suuqa pc iyo qaababkeeda, .doc, .docx, .xls iwm ayaa wali ah kuwa loogu isticmaalka badanyahay aduunka, waa khaanad in loo baahan yahay qol xafiis oo garanaya sida loo aqriyo. habka ugu fiican ee suurtogalka ah iyo runtii libreoffice, marka laga reebo .doc, qaabab kale ayaa si xun u akhriya, gaar ahaan haddii aad bilowdo inaad dhigato miisas ama waxyaabo kale.
Halkani waa meesha calligra uu ka muuqdo, suugaan ku qoran qt, oo wali ku jirta beta laakiin aan aniga shaqsiyan wax dhibaato ah igu abuurin, waxay si fiican u akhrinaysaa qaababka lahaanshaha ee Microsoft, waxay si fiican ula jaanqaadaysaa kde iyo wixii ka sarreeya oo dhan waxay ku siinaysaa beddel ahaan xafiiska Ms waxaanan si daacad ah u aaminsanahay in tani ay sii wanaajin doonto xitaa sii deynta nooca ugu dambeeya.
Waxaan si gaar ah u jeclahay ereyada iyo miisaska (sida ay ugu egyihiin Ms Exel), in kastoo krita sidoo kale la qadariyo.
Marka kani waa taladayda usbuuca, inaad fursad yar siiso qolka xafiiskan ee ku yimaada xoog oo doonaya inuu ku sii jiro kombuyuutarradeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Calligra, oo ah xafiiltan weyn Libreoffice
66 faallooyin, ka tag taada
Tani ma ahan inay abuurto khilaaf, laakiin waxaan u maleynayaa inaad aqbasho in shaqooyinka qaar ay ku adkaadaan qaar ka mid ah dadka isticmaala LibreOffice.
Tusaale ahaan, in kasta oo Qoraagu uu daboolayo qayb weyn oo ka mid ah baahiyahayga, si aan u dhaqaaqo miiska waa inaan gooyaa, dhajiyaa oo tirtiraa asalka aniga waxtar badan iima leh (waana codsi ka yimid dhawr sano ka hor, waxaan filayaa in deeqaha aysan gaarin oo ay jiraan astaamo kale oo leh mudnaan sare). Dhanka qaababka, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay arrin kale, laakiin haddii kooxda Calligra ay danaynayso la jaanqaadka qaababka lahaanshaha, markaa waa inaan uga mahadceliyaa iyaga oo noloshayda u fududeeyay (taas macnaheedu maaha inaan ka tago qaabab bilaash ah).
Markii aan isticmaalay Koffice, xanaaqa weyn ee ay igu abuurtay wuxuu ahaa qaabeynta farta, taas oo runtii ahayd mid aad uxun marka lala barbar dhigo tifaftire kale oo lamid ah. Laakiin hadda markay dhejiyeen inay hagaajinayaan taas (iyo shaashadaha ayaa muujinaya horumar weyn) oo tixgelinaya dabacsanaanta weyn ee ay tahay inaad ku xirto isku xirnaanta, waxaan u maleynayaa inay noqon doonto tifaftireheyga caadiga ah.
Iyo wax weyn oo lagu soo kordhiyay aniga ayaa ah inay la midoobeen KDE, sidaa darteed waxaan runtii rajeynayaa in mashruucani uu ku guuleysan doono sida ugu wanaagsan.
PS: Waa maxay qeybinta aad ku tijaabisay qolkaan?
Waxaan ku tijaabiyey chakra Linux :).
oo maxay ahaan laheyd dhibaatooyinka dhibta badan ee libreoffice ???. Waxaan u maleynayaa inay kafiican tahay taageerida mashaariicda intii aan dhaliili lahaa ...
dhibaatada qaababka lahaanshuhu maaha mid ka timid libreoffice .. waa la ogyahay in u beddelashada .doc, .docx ama .xls qaabab bilaash ah ay tahay dhibaato dhab ah, in calligra aan laga dhaafi doonin sidoo kale ..
Ma ii sharixi kartaa markaa sababta markaan keydiyo .xls sawiro kala duwan iyo xisaab kala duwan leh, badhanadiisa iwm, marka la joogo libreoffice-ka ay si xun u furaan oo ay si sax ah u furaan calligra? Aragtidaada, ma ahan inaad wax dhaleeceyso adduunkan, kaliya nagu dhiirrigeli inaan horumarinno, si wanaagsan ayaan u sameyneynaa!
Machadka waxaan ku isticmaalaa xafiiska microsoft 2007
Waxaan u arkaa inaadan aqbalin dhaleeceynta saaxiibkey, waxa kaliya ee aan dhihi karo ayaa ah in qoraalkaagu uu leeyahay taabasho u qalma oo ku saabsan libreoffice sababtoo ah kumuu tusinno garaafkaaga si wanaagsan ...
Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn aqoonsi sax ah .. mushkiladda beddelka waxaa iska leh qaababka lahaanshaha iyo sameynta beddelka ayaa ah fursad dhab ah ..
Si aad u wanaagsan, waa marki saddexaad ee aad isla wax qorto, waan horeba waan kuu fahmay.Haddii ay fikirkaaga tahay ok, laakiin ma aqbalayo maxaa yeelay dabiici ahaan ma raacsani, haddii kale ma aanan qori lahayn inaan qoray. .
Waxaan la wadaagayaa ra'yiga xfraniux, libreoffice wuxuu daboolayaa inta badan baahiyaha, diirada ugu weynna waa inay noqotaa qaabab furan. Dhanka kale, waa maxay waallida kan ay ku dhex qasayso is-dhexgalka! Haddii adeegsadeyaal badani doorbidaan naqshadda LO ee hadda jirta, waa sababta oo ah qaybta xafiiska ee ms waxay keentaa is-dhexgalyo yar iyo kuwa yar oo la istcimaali karo, laga bilaabo ms 2007 wixii ka dambeeya, wax waliba waa fowdo. Waxa kaliya ee cusub ee ku saabsan calligra marka la eego naqshadeynta ayaa ah inay u kala qaybinayso xulashooyinka qaabeynta dhinaca dhinacyada. Waa arrin aragti ah, wax intaa dhaafsiisan malaha.
Waa ansax in la caddeeyo in Calligra uusan dhab ahaan ahayn xirmada KOffice 😉
In markii aad ka furato dukumiinti xafiiska Microsoft (2007/2010) oo lagu sameeyay xafiiska bilaashka ah, ay dhaqaajineyso xadadka, sawirada, hadii aad wax u bedeshay wax saameyn ah sawirada waxay u muuqdaan kuwo laga cabsado iyo waxa la yiraahdo markii la isku dayayo in la daabaco… circus. Dhibaatadu kuma jirto Libre Office, pex waa iswaafajinta in la furo feylasha Microsoft Office waxaana ka hadleynaa 80% kombiyuutarada aad u baahan laheyd inaad ku furato dukumiintiyadaada, sida jaamacada ama iskuul kasta tusaale ahaan. ..
Horeba marxaladan tiknoolajiyada, waxay kuxirantahay qolka xafiiska, marka laga reebo inuu yahay mid aan macquul ahayn, waa wax nacas ah.
Waqtigaan la joogo waxaad isticmaashaa dukumiinti google ah dukumiintiyadaada iyo voila, waxaad ka shaqeyn kartaa mashiin kasta oo leh xiriir internet ah.
Haddii waxyaalaha kor ku xusan aysan adiga kula muuqan, sidee ku saabsan iibsiga xusuusta USB-ga ah ee jaban oo aad ugu ridi kartaa libreoffice la qaadan karo? Waxaad ku xireysaa meel kasta oo ay ku jiraan walxaha qarxa oo waad sii wadi kartaa shaqada, daabacaadda, iwm.
Waxaan u maleynayaa in ku tiirsanaanta noocaas ah ee hal dhinac ama tan kale ay tahay inay dhammaato, qaabab furan ayaa jira si looga faa'iideysto iyaga madal / qalab kasta.
Jawaab Ranmaru Hibikiya
Waxaan isticmaali jiray libreoffice tan iyo markii ay muuqatay tan ka horna waxaan adeegsaday furitaan, labadaba Windows iyo Linux, mana aanan haysan ama wax cabashooyin ah ma qabin. Haddii machadka dhibaato kaa haysato qaabka, ku keydi dukumiintiyada qaab kale, ma ahan in Libreoffice aysan si fiican u aqrin qaababka, laakiin taasi, sida ay horay u sheegeen, MS Office waxay xirtaa qaababkeeda.
Looma badbaadin karo qaabab kaladuwan maxaa yeelay waxa aan sameynayo waa in loo dhiibaa macallin aan adeegsanaynin libreoffice si uu u furo odt, iyada oo aan la tixgelin in .odt (exel) uusan xitaa gaarin kabaha kabaha del .xls, laakiin dabcan taas waa inaad ka shaqeysaa waxyaabo muhiim ah oo kaliya maahan garaaf dhigaya magaca usbuuca hal dhinac, waqtiga kan kale iyo isku dhufasho a2 * b4. Taageerida kaliya qaababka furan waa qalad, adigu iskama xidhi kartid aduunka, tani waxay lamid tahay inaad dhahdo, wixii hada ka dambeeya waxaan isticmaali doonaa oo keliya bogag internet la'aan ah, waxaan dhageysan doonnaa muusig aan ahayn mp3 ama aac, ma arki doonno h264 fiidiyow ama ku xirmid msn, mana isticmaali doonno skype iwm iwm, aduunyo ayaa jira oo waxa ay ubaahantahay waa isdhexgal mana ku soo rogi kartid qaabkaaga kaliya inuu yahay 1-2% kaliya pc-yada aduunka, maxaa yeelay waxaad si fudud u lumisay dagaalka ka hor inta uusan bilaabin.
Iskuxirku waa mid aad muhiim ugu ah adduunyada maanta oo kale, runti waan ogahay dad badan oo aan isticmaalin libreoffice sababtoo ah isdhexgalka oo doorbidaya in la jabsado xafiiska ms, tanina waxay ku dhacdaa xitaa Linux.
[…] Taageerida kaliya qaababka furan waa qalad […]
Ma wadaagayo aragtidaada, lammaane, inbadan waan xushmeyn doonaa 😉
[…] Dhibaatada qaababka lahaanshuhu maahan libreoffice […]
Adigu maad wadaagin laakiin sharax isii, ma waxaan joojinaynaa la xiriirka dadka kale ee dhimanaya? Runtii ma u maleyneysaa in isticmaaleyaasha kale ee Windows-ka, oo 60 ama 70% ay joojinayaan isticmaalka .doc, .docx iwm maxaa yeelay waxaan u sheegnaa inay odt furantahay? Waxaad horey u ogtahay in arintu aysan sidaas aheyn oo ay dhici karto oo kaliya marka dowladaha aduunka oo dhami ay go’aansadaan inay sidaas sameeyaan. Anigu ma taageeri karo kaliya qaabab bilaash ah maxaa yeelay waxyaabo culus, shaqada shirkadaha, iyo soo bandhigyo dhici doona in ka badan hal qof oo aan isticmaalin Linux oo keliya, ma awoodi doono inuu furo, maadaama xafiiska Ms uu furan yahay. sidoo kale .odt ka hab gaar ah.
[…] Ma taageeri karo kaliya qaabab bilaash ah maxaa yeelay waxyaabaha culus, shaqada shirkadaha, iyo bandhigyada loo gudbin doono in ka badan hal qof oo aan isticmaalin kaliya Linux, ma awoodi doonaan inay furaan, maadaama Ms xafiisku wuu u furaa sidoo kale qaab gaar ah. […]
Tani uma muuqato mid aad loola jaanqaadi karo xaqiiqda, ama ugu yaraan wixii aan u arko. Waxaa jira shirkado aad u tiro badan oo, in kasta oo aysan u isticmaalin Linux kumbuyuutarradooda shaqada, haddana u isticmaalaan xirmooyinka xafiisyada bilaashka ah. Iyo haa, waxyaabaha halista ah, oo aad u daran waxaad isticmaali kartaa .odt.
Intaa waxaa dheer, markasta oo aan xaqiijinayo aqbalaad weyn oo qaababkan ah ganacsiga adduunka.
Ninyahow way dhici kartaa, laakiin waxaan ka hadlayaa Spain, adduunka intiisa kale ma ogi sida ay wax noqon doonaan, laakiin halkan Spain waxaan ku ogahay shirkado aad u yar oo adeegsada Linux, xitaa server-yada qaar badan ayaa adeegsada windows 2000 server.
Xalka tan waa mid aad u fudud:
Waxaad tahay * saaxiib kacsan * saaxiib…. wax kale oo la sameeyo oo aan ka ahayn abuurista khilaaf, waxay ahayd sida ugu fudud ee loo soo saaro miis isbarbardhig ah oo u dhexeeya libreoffice iyo calligra, marka loo eego kaliya soo saarista qoraal fekerkeyga u qalma ...
Hagaag, waa fikirkaaga waana kuu xor inaad haysato, laakiin xusuusnow, ku dhex mari qoraalada dadka oo ugu yeer tifaftiraha troll, ma ahan ixtiraam badan in la yiraahdo, laakiin waad la wadaagtaa ra'yi, sababtoo ah waad diidday, muddo, laakiin xaq uma lihid inaad caydid dadka kale. Ku farax inaad aragtidaadu halkaan sii joogi doonto oo aan la tirtiri doonin.
Waxaan u maleynayaa inaad tahay saaxiib aad u culus…. laakiin haddii aad dareento inaad ka xumaatay trollllka waan ka cudurdaaranayaa ... laakiin qeexitaanka troll waa:
Troll ama troll waa eray internet ah oo qeexaya qofka kaliya ee doonaya inuu si ula kac ah u kiciyo dadka isticmaala ama akhristayaasha, abuurista khilaaf, kicinta falcelinno la saadaalin karo, gaar ahaan adeegsadayaasha layliska ah, ujeedooyin kala duwan, laga bilaabo madadaalo fudud si loo joojiyo ama loo weeciyo mawduucyada doodaha , ama kicin kara ololka, adoo ka careysiinaya kaqeybgalayaashaada oo iska horkeenaya. Troll wuxuu noqon karaa mid ka sii yar ama ka casrisan, laga bilaabo akhlaaq xumo, aflagaado ama mowduuc ka baxsan, daandaansi khiyaano ah ama been ah oo ay adag tahay in la ogaado, iyada oo ujeedadu tahay xaalad kasta oo lagu jahwareeriyo ama lagu kiciyo falcelinta dadka kale. Xilligan ereygan waxaa sidoo kale loo adeegsadaa nooc kasta oo xumaan ah.
Micnaheedu maaha kaliya daandaansi ...
Horey ayaan kuugu sheegay in, hadaad rabto inaad caydo, qoraaladaydu maaha meelaha saxda ah, ma aqbalayo cayda mcanime, miyaan ku aqbali doonaa halkan?
Arrinta labaad ayaa ah in qeexitaanka troll uu aad u ballaadhan yahay kan aad doonayso inaad siiso, maadaama uu yahay eray la allifay oo uu labaad u yahay barta aad ka doonayso macnaheeda wuxuu ku odhanayaa hal shay ama mid kale, mawduucuna waa degeen. Si daacadnimo ahna, maahan wax qurux badan in lagu wareego aflagaadada qoraalada dadka kale, faallooyinka soo socda ee furaha si fiican looma aqbali doono.
Mudanayaal, aragtidayda, tani faraha ayey ka sii baxaysaa. Waxaan horeyba ugu eg nahay baloogyo gaar ah, Muy… xxx halka halkii aad u ekaan laheyd baloog (xarfaha oo dhan leh), waxay umuuqataa barnaamij show ah; Ma jecli fikradda ah inaan sidan nuxurka nuxurka boggan u baabi'iyo.
Qof kastaa wuxuu leeyahay ra'yigiisa iyo shuruudihiisa, haddii ay ballaaran yihiin, waxaan u maleynayaa inaan aqbali karno aragtida "shisheeyaha" kuweenna ...
PS: Waxaan rajeynayaa inaadan u qaadan arintan mid edeb daro ah, laakiin waxaan doorbidayaa inaanan ra'yigayga ka dhiibto isla sababtaas kor lagu sharaxay.
Maya, qalad ... faallooyinka lama tirtiro, mid kastaa waa inuu dhaqmaa, macno malahan haddii isticmaale i caayo, adiga, ama aqriste aqriste, halkan laguma kala duwana ama mudnaanta waxaa lasiiyaa qorista, maamulida ama wax la mid ah taasi 😉
KZKG ^ Gaara… Aan aragno wax, ma waxaad dooneysaa inuu noqdo sida baloog gaar ah ama meel aysan ka jirin vibes xun?
Ka soo qaad in adeer kuu imaado inuu kaaga warramo wax kugu dhacay McAnime tropo boqol kun oo qarni ka hor (markii aad yarayd), sidoo kale ma inaad ka tagtaa faallooyinka?
Waa hal shay in dadka loo oggolaado inay is muujiyaan iyo wax kale oo loo oggolaado in mid kastaa sameeyo wixii meeshaas ka soo baxa.
Wax yar ka fikir
Ninyahow, ma waxaad taabanaysaa xagjirnimada HAHAHAHAHA.
Dhammaan xad-dhaafku waa xun yihiin, waana ka sii fikirayaa berrito ... markii xaaladdu timaaddo, isla xilligaas ayaan go'aan qaadannaa (haa, waan qaadannaa ... ma ahan oo keliya faahfaahin dheeraad ah oo waxaan gaarayaa go'aannadaas)
Waxaan isku dayi doonaa, in kastoo sida ay sheegeen apt-get Wuxuu ii sheegayaa tan:
Waxaan u baahanahay inaan kala soo baxo 550 MB faylal ah.
2012 MB oo ah meel disk dheeri ah ayaa la isticmaali doonaa qalliinkan kadib
Mhh ma isticmaashaa deegaan gtk ah? Sidoo kale waxa laga yaabaa in waxa dhaca ay tahay in dhamaan calligra ay dajinayaan, taas oo ah ereyo, miisas, krita, wicitaanka qulqulka iwm, sifiican ufiiri waxa baakadaha yihiin ama ii dhaaf pastebin ehehe
Haddii aan isticmaalo GTK waana inay noqotaa maxaa yeelay waxaan rakibey keydka
laakiin sidaas oo ay tahay, isticmaalka kheyraadka waa wax la buunbuuniyey, in kastoo yaa garanaya ¬_¬
Waa inay tahay qt oo aad tixgeliso inaad isticmaaleysid desktop gtk, waa wax iska caadi ah, tan labaadna waa inay tahay beta5, laakiin beta oo ay jiraan waxyaabo lagu sifeeyo, waa la fahmi karaa: /
@ pandev92: Waad ogtahay waan kugu raacsanahay, qofku waa inuu laqabsadaa aduunka, maahan aduunka kuwa laga tirada badan yahay, waa la ogyahay inay tahay shaqo culus oo adag in wax laga badalo waxyaabaha qaar laakiin waan isku dayeynaa.
Tusaale waa msn haddii gabadha aad saaxiibka tahay ay adeegsato borotokoolkan oo sababta oo ah waxaan isticmaalaa softiweer bilaash ah waxaan joojinayaa lahadalkeeda oo umuuqda mid buunbuunin ah "jacaylkeyga jooji isticmaalka msn oo aad jabber tag hadaanan kugula dhameysan."
Haddii shirkaddu isticmaasho MS Office iyo wixii ku soo kordha iyada oo la adeegsanayo, ma fulin karno .odt la helay kaliya maxaa yeelay waxaan doonayaa. Waa waqtigii la qabsiga ama haddii kale "Waan joojiyay: D".
Hadday run tahay, waxaa jira nidaamyo si aad u xun loo qorsheeyay oo in badan ku fashilma, haddii aan ku khasbanaanno inaan u dagaallanno sidii aan u beddeli lahayn laakiin waa inaan maanka ku haynaa inay tahay nolol kale oo bannaanka ka baxsan adduunkuna uusan marna u leexanayn siduu doono.
Ma aha oo kaliya boggan internetka inay sheegaan in calligra uu si fiican u maareynayo .docx, xlsx, pptx, waxay ku yiraahdeen boggag aad uga badan inta aan akhriyay, sidoo kale calligra waa cagaar oo waxay bilaabaysaa dariiqa adag ee naftiisa lagu soo rogi karo. caalamka Linux iyo windows-ka dunida, laakiin sida ay u socoto calligra waqti aad u yar ayuu dhaafi doonaa Libreoffice waxay dhaawaceysaa cidkasta oo wax yeeleysa. Waxay ila tahay aniga oo akhriyay in hirgalinta koodhka wicitaanka ay ka nadiif iyo dhib yartahay xafiiska bilaashka ah, taas oo sahlaysa in kaligra ay si dhaqso leh u horumariso. Calligra waa suugaanta dambi-jiifka ah ee samayn doonta horumarin badan oo noocyada noocan ah ah oo ku jira Linux si ay u soo baxaan.
Maalin kasta maahan KDE oo keliya laakiin sidoo kale codsiyada loogu talagalay deegaanka, wax badan ayey soo hagaagayaan. KDE Office Suite ma ahan wax aad uga dambeeya, qaar badan ayaa ka hadlaya shaqada ka dambeysa qaabkan ugu dambeeyay ^ _ ^
Aad baad u mahadsantahay, macluumaad wanaagsan 😀
Dhab ahaan. Waxaan kaa sugayaa walwal.
Kaliya nambarkii ugu dambeeyay ayaa soo baxa, waan dumiyaa
Hagaag, LibreOffice wuxuu igusoo rogaa si fiican XLS iyo XLSX. Sidoo kale, Calligra waa mid aad u culus. Waxaan hayaa LibreOffice-kayga si habsami leh oo habsami leh ugu socda XFCE-kayga.
Inta udhaxeysa dhadhanka iyo midabada ...
Hal su'aal, waa maxay waxa kugu culus adiga? Immisa adhig ayaad leedahay? Taasi ma adeegsiga Firefox iyo dhaleeceynta barnaamij aad u culus ...
Waxaan kaliya dhihi karaa buug yaraha leh amd turion x2 iyo 4 gb wan oo kale ah sida tayda (qiyaastii 500 euro laba sano ka hor), muhiim maahan in la fiiriyo kormeeraha ilaha.
Saaxiib, ma isticmaalo Firefox. Haddii aad eegto astaanta waxaad arki doontaa inay tahay astaanta Chromium. Uma isticmaalo Firefox culeyskiisa culus.
Waxaan ku rakibay XFCE si sax ah isla sababtaas, RAM la'aan awgeed. Laakiin sikastaba xaalku ha ahaadee, ma aanan ogeyn inay dambi ahayd inaan rabo in mashiinkaagu si wanaagsan u shaqeeyo.
KDE waa mid aad u fiican laakiin waxay nuugaysaa dhamaan RAM-ka ay awoodo.
Mashiinkaygu wuxuu leeyahay kaliya 1.5GB RAM. Miyaanan fikrad ka bixin karin RAM-ka hooseeya? Ma aanan ogeyn in Adduunyada Xorta ah aan ku nimid takoorka noocan ah.
Ninku wuxuu ku wareeray astaanta ubuntu iyo Firefox, waan ka xumahay XD ..
Waayahay 🙂 Waxba ma dhacaan.
Waan awooday inaan u adeegsado KDE sharafteeda oo dhan, kaliya hada markaan bedelay RAM-ka oo aanan mar dambe haysan 1GB laakiin 2GB.
Kahor (1GB) waxaan isticmaali jiray KDE, waxyaabo badan ayaan ka qaatay runtiina waxay ahayd luul, waxay ku bilaabatay wax ka badan 200MB oo la cunay, in kasta oo aysan ahayn dawada, farqiga dhabta ah ayaa la dareemay markii la kordhiyay RAM ... 🙂
Qaabka "pandev92" uguyaraan mowduucan, wuxuu ixasuusinayaa nin la yiraahdo metalbyte oo ka yimid goob cayiman.
PS Wax cabasho ah kama haysto wax ku saabsan shaqaalaysiinta.
Kaalay, waad ku hagaajineysaa faallooyinkaas
Waan ka xumahay inay waxaas oo dhan i xusuusiyaan tan http://www.youtube.com/watch?v=kzdykNa2IBU&feature=player_embedded#!
Haddii aadan u baahnayn inaad sidaa igu tiraahdid, anigu ololahayga kuma jiro
Naxariista ayaa ah in kalabar waxyaalahaasi ay dhab yihiin, laakiin dabcan, waxaad u baahan tahay inaad ku noolaato Spain, ka soo shaqeysay maamulka, ku jirto koorso suuq ama ganacsi si aad u aragto taas, haddii aad si fudud u tahay isticmaale guri, ma sameyn doonto wax kuu ah
Hagaag, waxaan ku noolahay Sudacalandia mana jirto cid igu qasbi karta adeegsiga MS Office, jaamacadana waxaan kulahaa vanero macalink aakhirkiina waxay kudhamaatay furitaanka xafiis si loo saxo, miyay taasi ahayd mise waxay isiisay liisanka Windows iyo Office 😀
Maaddaama halkan ay jirto amar ku saabsan isticmaalka softiweerka maamulka bulshada iyo sidoo kale wax kale waxay ku jiri lahaayeen shaqo gaar ah. Nasiib wanaag kuma shaqeynayo qolalka xafiiska.
Waxaan ku noolahay Isbaanish waxaanan soo qaatay koorso maamul, laakiin dhibaatooyinkaas midkoodna ma qabin, laga yaabee maxaa yeelay dhamaan asxaabteyda fasalka wada ahaa waxay ahaayeen Mongolia xishood badan (qaarna waxay ahaayeen guddi bir lagu xardho) oo waxay igu qaadatay qaybtii 4aad inaan sameeyo shaqada ee fasalka hahahaha, iyada oo aan shaqada guriga
Geesinimo, hubi inaynaan isla wadaag ahayn? Waxaan sidoo kale haystaa posh stoners mac isticmaalayaasha XD
Maya, hadday xitaa i weydiiyaan sida loo dhigo ...
Waxay ahayd PCPI maamul, waad qiyaasi kartaa heerka dadka Mongolia ...
Fariin wanaagsan, inkasta oo xoogaa ciil ah oo laga qabo libreoffice.
Bilowgii adduunkan waxaan isku dayay Koffice, oo ah musiibo bilowgii, anigoo runtii ikhtiyaar u leh (aniga ahaan) xafiis furan.
Nasiib wanaag (ama wax kasta oo aad rabto inaad u wacdo) weligey dhibaato igama gelin isticmaalka qaabab bilaash ah shaqadayda iyo / ama macaamiishayda, maaddaama badankood la daabacay umana baahnayn inaan soo gudbiyo shaqooyinka dijitaalka ah.
Markii waqtigu socday (iyo sida aan u jeclahay KDE) waxaan isku dayay Koffice markale, layaabkaygu wuxuu ahaa sidii aan u arkay sida astaamaha qaar ay gaar ugu yihiin (nooc erey aad u fiican ka mid ah waxyaabo kale), taasi, malaha qaladkan, laakiin kuwa kale tafatirayaasha qaabka furan uma aysan soo bandhigin si sax ah. Waqtigaas, waxaan ka tagay libreoffice, haddii ay dhacdo is-dhexgalka, "culeyskiisa" darteed (waxaan xusuustaa inay had iyo jeer culus tahay, ma aqaano haddii aniga keliya la ii yahay) haddii kale koffice.
Waxaan had iyo jeer la dhacsanaa oo aan jeclaan jiray codsiyada KDE si aad u hufan, shaqeynaya oo muuqaal ahaan qurux badan, calligra wax badan ayuu ballan qaadayaa wixii aan ka akhriyayna wuxuu ku socdaa wadada saxda ah.
Mararka qaar way fiicantahay in la isbarbar dhigo, iyo ilaa xad in la dhaleeceeyo, maxaa yeelay taasi waa marka ay horumariyayaashu ama adeegsadayaashu laftoodu ay arkaan khilaafaadka iyo horumarkaas oo loo baahnaan lahaa.
Ku jawaab ranmaruhibikiya
Weligay ma maqal mashruuca, laakiin waxaan si fiican u sugi lahaa liinta 😀
Waxaan mar uun dhibaato ku qabay in dukumiinti ka socda hal shay oo ka mid ah kuwa kale lagu beddelay, xalkaygu wuxuu ahaa mid fudud, hagaajinta xadadka libreoffice, ku rakibo foomamka microsoft, hagaajinta meelaha tabka, kala dheereynta khadka iyo voalá, mar dambe ma aqaano qaab-dhismeedka Isticmaalka xusuusta, bilaash iyo furan waxaa loo qaabeyn karaa inay cunaan wax ka yar.
Hadday taasi tahay waxa aan sidoo kale samayn jiray waqti ka waqti, miisas badan oo macallinkayga sayniska kombiyuutarka i siiyay oo lagu sameeyay .docx, waxay ka baxeen cidhifyada libreoffice-ka waxayna ku khasbanaadeen inay beddelaan xadadka iwm
yaab leh, gal galka faylka ku jira
oo samee ls -a
ii sheeg haddii aysan muuqan
Waan ku qaldanaa mowduuca.
Bal eeg wixii aan kuu sheegnay inaad faallo ka bixisid adoo sakhraansan ... laakiin xitaa dan kama lihid ... LOL !!!
Doqon ma cabbo. (Ugu yaraan si joogto ah uma aha, sida qof mar ku dhahayo amaahda) waana taas haddii ay i qabato gabar qurux badan 😀 (dhib malahan haddii ay timo cad tahay ama wax igayar iga weyn tahay).
Ama nin, isagoo sakhraansan waad ogtahay ...
Ma waxaad ka dhahdaa khibrad? …. LOL !!!!
Waqtiga kaliya ee aan sakhraansanaa (waxaan u maleynayaa in dhagaxtuurku iiga sii badnaa daroogada intaan sakhraansanaa) waxay la joogeen rag iyo dumar da 'weyn oo 30 sano jir ah, wali xoogaa waan miyir qabay inkasta oo xusuusta muddo gaaban igu jirtay. Ma jirin wax duub ah ama wax ah
Aan aragno, oo waxaas oo dhan caddaynaya bit
<° Linux MA AH degel ka duwan kuwa kale, jecel ololka ama doodaha aan macnaha lahayn, ama cayda iyo kuwa kale.
Tan cidna looma jeedin, laakiin waxay u muuqataa inay habboon tahay in la yiraahdo 😉
Sidaad aragtay oo keliya ma nihin faahfaahsan oo waxaan ku qorayaa barta, hadda waxaan sidoo kale haysannaa Courage horeba dabogal 92 (weli Erithrym lama sii daayay haha). Muhiimadu waxay tahay qoraa kasta wuxuu leeyahay qaab qoraaleed u gaar ah, fikirkiisa shaqsiyeed, iyo tan ugu muhiimsan, waaya aragnimadooda gaarka ah ee aduunkan.
Tan waxaan ula jeedaa taas, natiijada qof qaba codsi X uu heli karo, maahan inuu la mid noqdo inta kale, hadda OpenGL ayaa isiinaysa dhibaatooyin waana inaan u wareegaa XRender, laakiin inta kale ma lahan dhibaatooyinkan (xitaa Markaad isticmaaleyso isla distro).
Sikastaba, nafsadaada udhaqma, yeynaan ugu yeerin qof doqon ama wax la mid ah kaliya sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaysan aqoon wax aasaasi ah, ama inay la kulmeen natiijooyin X ka duwan kuwa aan leenahay
Salaan kadib iyo hada ... dhamaanteen waxaan ku koreen LOL !!!.
PS: Runtii waxaan rabaa inay halkaan jawi wanaagsan kajirto, fadlan… 😉
Hubaal .. hadda si aad shaqo ugu dhiibto macallinka, wuxuu kugu qasbayaa inaad bixiso shatiga xafiiska ama aad burcad-badeed noqoto. Kaalay ... geedku yuusan kuu oggolaan inaad kaynta aragtid.
Fiiri .. ODF waa bilaash sida .txt.
Haddii macalinka uu ka raadsado .doxjksdfsd, ha ku siiyo xafiiska 2018 waxaanan arki doonaa haddii aan ku qaadsiiyo pc-kayga basophy-ka lagu diyaariyey aasaasiga.NET14.
Ku jawaab guille
Liisanka ma kala soocayo u dhexeeya horumariyaha iyo isticmaalaha celceliska, sidaa darteed waa mid xaddidan labadaba marka loo eego, horumariyeyaasha xitaa in ka badan.
Waa "xabsi" nooc kasta oo adeegsade ah, marka hore maxaa yeelay OS-ka aad iibsato xitaa adiga ma aha, maxaa yeelay ma amaahi kartid saaxiib, ma qaabeyn kartid dibna uma dhisi kartid, shirkaddu mas'uul kama aha luminta xogta, laakiin goorta waxay noqon kartaa isku OS (nuglaanta, ciladaha, iwm.) Sababta, iwm.
Waan fahamsanahay saaxiibkay Italo, sidoo kale waxaan leeyahay cabashooyin isku mid ah oo ku saabsan xafiiska furan iyo kan libre, in aan ka dhigi doonno xafiiska imminka, waxaanan u maleynayaa inay tahay inaan taageerno furitaanka iyo libre, iyo sidoo kale inay arkaan sida loo xaliyo dhibaatada with .doc, from Ma jiro wax dagaal ah oo noo dhexeeya annaga iyo kuwa micosoft oo qosol leh, waxaan jeclahay xafiiskeyga fudeydkiisa adeegsiga, laakiin waa culus yahay, xusuus badan ayey qaadataa oo waqti ayey ku qaadataa markii la rakibayo (illaa iyo hadda waxaan hayaa looma bixin liisankooda lol).
Marka waxaa jira qof la imanaya xalka .do iyo isku-darka.
Oo muxuu macalinkaagu u rakibayaa libreoffice? Ma bixin doono wax lacag ah si loo rakibo adigana (waa inaad) rakibtaa xafiiska Ms, sidoo kale macallinkaagu daruuri ma u baahan yahay inuu wax ka beddelo dukumintiga? mise aqriso uun?
Si cad waa inuu wax ka beddelaa, saxaa, sharraxaad ka bixiyaa iwm xD, taasi waa waxa macallinka loogu talagalay, marka lagu daro, bixinta wax wanaagsan uma arko inay dhib ku tahay iyo in ka badanba kharashka yar ee ardaygu ruqsadda siiyo. leeyihiin.
Qof ma ii sheegi karaa haddii ay jiraan rakibayaal u shaqeeya Mac OS X? Waxaan u arkaa inay culeys igu tahay isticmaalka MacPorts ama keydka Homebrew, waa inaan soo ururiyaa, iwm.
Salaan ka timid Ecuador, Koonfurta Ameerika.
Xarunta Software Ubuntu hadda waxaa laga heli karaa khadka tooska ah